Dagaal xalay galbeedka degmada Buulo burde ku dhexmaray ciidamada AMISOM iyo xoogaga Al-Shabaab
Dagaalo aad u culus oo socday muddo saacado ah ayaa xalay ka dhacay qeybo ka mid ah degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan kuwaasoo dhexmaray ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMISOM iyo xoogaga Al-shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalkan uu qarxay markii xoogaga Al-shabaab ay dhowr jiho weerar kaga soo qaadeen saldhig ciidamada AMISOM ka sameysteen galbeedka degmadaas.
Shacabka degmada Buulo-Burde ku dhaqan ayaa sheegaya iney maqlayeen daryanka rasaas kala nooc iyo hub culus oo mararka qaarkood ku soo dhacayey bartamaha degmadaas iyagoo xusay iney cabsi badan dareemeen.
Waxaa la soo sheegayaa in dagaalkan uu sababay khasaare badan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, iyadoo saaka meydad badan hase ahaatee tirakoob sax ah aan laga heynin lagu arkay nawaaxiga goobihii lagu dagaalamay.
Ma jiraan warar ay dagaalkaas ka soo saareen xoogaga Al-shabaab iyo ciidamada AMISOM, hase ahaatee waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu cuslaa ee degmadaas ka dhaca tan iyo markii dhowr bilood ka hor lagala wareegay Al-shabaab.